Bahrain : Mitohy ny #OccupyBudaiyaSt · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2011 1:55 GMT
Ity lahatsoratra ity dia ampahany manokana amin'ny lahatsoratray mikasika ny Hetsi-panoherana ao Bahrain 2011.
Ireo mpanao hetsi-panoherana avy ao Bahrein dia manohy ny fikomiany andavan'andro na dia eo aza ny famoretana ataon'ny governemanta, governemanta izay milaza amin'izao tontolo izao fa manomana fanovàna ary tsy tafiditra amin'ny famonoana olona tsy manan-tsiny. Io fifanandrinana tsy dia nahery setra loatra tamin'ny mpanao hetsi-panoherana io dia namoizana ain'olona roa ary tsy tambo isaina ireo olona naratra nanomboka ny Alakamisy.
Ny Alakamisy, nanomboka ny hetsi-panoherana #OccupyBudaiyaSt ireo mponina ao Bahrain. Tamin'io andro io, lehilahy iray 22 taona antsoina hoe Ali Al-Gassab no maty ary ilay mafana fo/bilaogera Zainab Al-Khawajah dia voasambotra noho ny fandraisany anjara tamin'ilay hetsi-panoherana Occupy Budaiya na Bodoy Budaiya. Ilay hetsi-panoherana Occupy Budaiya na “Bodoy ny Làlamben'i Budaiya” dia natao hanerena ny governemanta mba hamotsotra ireo gadra politika sy ny mba hanomezany voninahitra ireo maritiora 40-no mihoatra avy ao Bahrain , maty teny ampela-tanan'ny Hery Mitam-piadiana efa hatramin'ny nanombohan'ny korontana tao Bahrain ny volana Febroary.
Ny hetsika tena nanamarika indrindra dia ilay antsoina hoe ‘Shakura Massacre‘ na ny “Vono moka tao Shakura“; tranga izay azon'ny fakan-tsary fito samy hafa. Ahitàna polisy eny amin'ny tafon'ny tranobe avo ao an-tanànan'i Shakura, ao amin'ny lalàmben'i Budaiya, namono lehilahy 18 ilay izy ary namela azy tamin'ny ratra mafy nahazo azy. Ny Minisitry ny Atitany dia nandefa bitsika mba ho fanazavana iny tranga iny, vao maraina be ny Asabotsy tamin'ny filazana hoe :
@LuluAvenue : Aty an-tanànanay dia misy hetsi-panoherana & tafihan'ny polisy #Bahrain ,, feno entona mandatsa-dranomaso teny rehetra teny!!
@MazenMahdi : Nipoitra avy any ireo polisy #occupybudaiyaST tsy nisy fampitandremana akory.
@chanadbh : Lahatsary misy ireo polisy mamely ireo mpanao hetsi-panoherana amin'ny entona mandatsa-dranomaso tao #OccupyBudaiyaSt vao haingana : bit.ly/vATs3I
@MazenMahdi : Ny sasany dia nijanona teny an-dalàmbe #occupybudaiyaST fifandonana mitsitaitaika.. ny Tanora dia niaro ny tao anaty arabe ho fisorohana ny fihoaram-pefy
Ity lahatsary nakarin'i (MrBuHaider) ity dia mampiseho ireo mpanao hetsi-panoherana mipetraka amin'ny sisin'ny arabe mihiaka hoe “Somood” (Fiaretana) tamin'ny fotoana nanafihan'ny polisy
Lahatsary hafa (nakarin'i kawaranews) no mampiseho ireo Hery miaramila manafika ireo olona izay handeha hivavaka tao amin'ny Maoske “chiite” izay efa rava
Ary ito lahatsary ito (nakarin'i mmeha89) dia mampiseho ireo mpanao hetsi-panoherana teo amin'ny sampanan-dalan'i Abu Subia notafihan'ny polisy mpandrava korontana
Indro misy lahatsary hafa (nakarin'i SEARCHMEALL) izay mampiseho ny fanafihan'ny polisy ireo mpanao hetsi-panoherana. Tsy maintsy niditra tany aminà toeram-pivarotana izy ireo ary ny maro amin'izy ireo no naratra na sempotra
Ity lahatsary ity (nakarin'i alawy1221) dia mampiseho vehivavy voadaroky ny polisy
Anio, ireo olona misaona ao Bahrain dia nandevina lehilahy iray indray tao an-tananàn'i Al Muqsha, mbola amin'ny lalàben'i Budaiya ihany koa. Toy ny mahazatra, nitifitra entona mandatsa-dranomaso ireo polisy taorian'ilay fandevenana an'ilay rangahy lehibe 73 taona Abdulali Ali Ahmed, izay nambaran'ireo fianakaviany fa maty noho ny fahasemporana tamin'ny entona.
Tao amin'ny Twitter, Al Sahawly dia nizara ito lahatsary ito, maneho ampahany amin'ireo mpanao hetsi-panoherana niharan'ny famoretana :